Nagu saabsan - Quanzhou Omi Dharka Co., Ltd.
SILSILADA SOO SAARKA
Quanzhou Omi Dharka Co., Ltd waxaa la aasaasay sanadkii 2008 si ay u taageeraan macaamiil aad iyo aad u tiro badan oo ka kala yimid adduunka oo idil. Maaddaama ay tahay shirkad wax soo saar isboorti xirta, waxaan ilaalineynaa faa'iido muddo dheer socotey, khibrad urursan oo la yaab leh oo ku saabsan alaabooyinka R&D, wax soo saarka, adeegga macaamiisha, iyo Tayada xakamaynta
Iyada oo ay naga go'an tahay tayada wax soo saarka, farsamada gacanta iyo hagaajinta geeddi socodka, waxaan higsaneynaa in aan ka dhigno geedi socodka wax soo saarka dharka oo dhan mid fudud oo fudud, madadaalo iyo dhib la'aan ah macaamiisha.
Iyada oo loo marayo dhaqankeenna naqshadeynta, wadista iyo khibradda shaqsi kasta oo shaqaale ah, waxaan si gaar ah u joognaa inaan siino adeegyo heer sare ah heer caalami macaamiil caalami ah.
Inay noqoto shirkadda sida ugu fiican u fahamta una qancisa wax soo saarka, adeegga iyo baahiyaha noocyada moodada-adduunka oo dhan
Si loo helo jawi shaqo oo wanaagsan oo dadku ku dhiirrigeliyaan inay koraan oo ay bixiyaan waxa ugu fiican
Inuu noqdo lammaane la isku halleyn karo oo waxtar badan dhaafsiisan filashooyinka
Si loo soo saaro badeecado buuxinaya filashooyinka tayada macaamiishayada iyo macaamiishooda
Kobcinta shabakad wada-hawlgalayaal ah iyo dhisidda daacadnimo labada dhinac ah
Hubso in wada-hawlgalayaashayada ay bixiyaan mushahar caddaalad ah iyo jawi shaqo oo aamin ah
Inaad noqoto lammaane aamin ah adoo ilaalinaya qiyamka daacadnimada iyo ilaalinta IP-ga macaamiisheenna
Waxaan ku leenahay shaqaale xirfadlayaal ah R&D, Technology, wax soo saar, iyo adeegyo. Waxaan nahay koox leh is-dhexgal xoogan oo ka shaqeynaya hadafka kaliya: si aan u siino macaamiisheenna adeegyo sahlan oo hal-joogsi ah oo aan ku koobneyn oo keliya taageerada tikniyoolajiyadda xirfadeed laakiin sidoo kale sharaf iyo saaxiibtinnimo.
Waxaan ku takhasusay dharka firfircoon, dharka isboortiga, iyo xirashada bannaanka. Wax soo saarkayagu waxaa diiradda lagu saaray ururinta qiimaha iyo isboortiga shaqeynaya. Sida Dharka orodka, dharka riixo, yoga iyo jir dhiska oo xiran, Baaskiil wadashada iyo jaakadaha jiilaalka banaanka, oo inta badan lagu muujiyo neefsashada, UV-caddeynta iyo qalaylka degdegga ah. Isla mar ahaantaana, waxaan ku jirnaa horumarinta dhar cusub oo leh jawi-saaxiibtinimo, qalabka R-PET, taas oo naga dhigaysa mid aad u tartamaya oo aan fiicnayn.
Waxaan noqonay mid tartan badan oo dhex mara isdhexgalka silsiladda sahayda, kaliya ma ahan horumarinta iyo taageerada wax soo saar ee ka imanaya unugyada wax soo saarka gudaha, sidoo kale waxaan xiriir dhow la leenahay warshado aad u wanaagsan iyo kuwa wax iibiya ee ku sugan dhul weynaha Shiinaha, Taiwan iyo Aasiya, kuwaas oo ku takhasusay dhammaan noocyada isboortiga.